याे ‘टालाटुली’ गठबन्धन कति दिन रहन्छ ? हेर्दै जानुछ : महासचिव पाेखरेल – E Kutumba
By ईकुटुम्ब	 On Aug 30, 2021 0
भदौ १४, २०७८ सोमबार काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पाेखरेलले सत्तारुढ गठबन्धनलाई ‘टालाटुली’ को संज्ञा दिनुभएको छ । महासचिव पोखरेलले सत्तारुढ गठबन्धन धेरै दिन टिक्न नसक्ने दाबीसमेत गर्नुभयो ।
सोमवार काठमाण्डाैमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी नेशनल पोलिटिक्सको सही पोलमा उभिएर देशलाई सही दिशा दिने गरी अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो ।महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘टालाटुली बाटुली के जाति भन्ने कुरा छ नि । त्यो हेर्दै जानु छ । यो गठबन्धन कसरी रहन्छ, कति दिन रहन्छ ? कसरी गर्छ, हेर्दै जानुछ । हामी नेशनल पोलिटिक्सको सही पोलमा उभिएर देशलाई सही दिशा दिने हिसाबले अगाडि जान्छौँ ।’
महासचिव पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेभित्रको गुटबन्दीको कारण आफ्नो पार्टीमा विभाजन आएको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले पार्टीको आउँदाे महाधिवेशनमा आफू पनि अध्यक्ष पदका लागि योग्य उम्मेदवार भएको बताउनुभयो । सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा महासचिव पोखरेलले इतिहास, निष्ठा, निरन्तरता र क्षमता सबै हिसाबले आफू कुनै पनि जिम्मेवारी लिन सक्षम रहेको बताउनुभयो । तर त्यसका लागि परिस्थितिको ख्याल गरेर आफू अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘मैले चाँहि के बुझ्छु भने त्यो संवेदनशील घडीमा आवश्यक्ता के पर्छ ? कस्तो हुन्छ ? देशभरका कार्यकर्ताको चाहना के हुन्छ ? डिमान्ड के हुन्छ ? त्यो कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ । म मनोगत ढङ्गले भन्न त भनौँला तर त्यस बेलाको परिस्थिति, कार्यकर्ताको चाहना, आवश्यक्ता छ कि छैन ? त्यो कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ । तर तिमी त्यो क्षमता राख्छौँ कि राख्दैनौ भनेर मलाई सोध्ने हो भने मैले फेरि दोेहोर्‍याउँछु– म इतिहासले, निष्ठाले, निरन्तरताले, क्षमताले कुनै पनि जिम्मेवारीमा डिजर्भ गर्छु ।’नेकपा एमालेको आउँदाे महाधिवेशन २०७९ साल वैशाख १० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । महासचिव पोखरेलले त्यसैको तयारीका लागि पार्टीले आउँदाे असोज पहिलो हप्ता विधान महाधिवेशनको आयोजना गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
१६ हजार २ सय ३३ नमुना परीक्षण गर्दा २ हजार २ सय ९५ जनामा काेराेना सङ्क्रमण